पवित्र हुनु भनेको के हो?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उरुन्ड् उर्होबो एस्टोनियन ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक काजाक (अरबी) काम्बा किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोरियन क्याटालान क्यानगोन्डे क्रोएसियन क्वान्यामा क्षोसा गा गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली डच डाँग्मे डेनिश तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पारसी पेन्सिल्भेनिया जर्मन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाओले बाटाक (टोबा) बाश्कीर बिस्लामा भलेन्सियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सिंहला सिडामा सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
पवित्र हुनुले अशुद्ध कुराले नबिटुलिएको अवस्थालाई बुझाउँछ। “पवित्र” भनी अनुवाद गरिएको हिब्रू शब्दको अर्थ “अलग्गै राख्नु” भन्‍ने हुन्छ। त्यसैले कुनै कुरा पवित्र छ भन्‍नुको मतलब त्यो सफा र शुद्ध हुन्छ र त्यसलाई सामान्य प्रयोगबाट अलग्गै राखिएको अर्थात्‌ छुट्ट्याइएको हुन्छ।
यहोवा * परमेश्‍वर अत्यन्तै पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँबारे बाइबल यसो भन्छ: “तपाईंबाहेक पवित्र अरू कोही छैन।” (१ शमूएल २:२) त्यसैले परमेश्‍वरसित पवित्रताको स्तर तोक्ने अधिकार छ।
परमेश्‍वरसित प्रत्यक्ष सम्बन्धित कुनै पनि कुरालाई “पवित्र” भन्‍न सकिन्छ। खासगरि उहाँको उपासनाको लागि अलग्गै छुट्ट्याइएका कुराहरू पवित्र छन्‌। बाइबलमा उल्लेख गरिएका केही पवित्र कुराहरू यसप्रकार छन्‌:
पवित्र ठाउँ: जलिरहेको पोथ्रानजिकै उभिरहेका मोशालाई परमेश्‍वरले यसो भन्‍नुभयो: “तँ उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो।”—प्रस्थान ३:२-५.
पवित्र जमघट: पुरातन समयका इस्राएलीहरू यहोवाको उपासना गर्न वर्षेनी चाडहरू मनाउँथे। ती चाडहरूलाई “पवित्र महासभा” भनिन्थ्यो।—लेवी २३:३७.
पवित्र सरसामान: प्राचीन यरूशलेमको मन्दिरमा परमेश्‍वरको उपासना गर्न प्रयोग गरिने भाँडाकुँडालाई “पवित्र सामान” भनिन्थ्यो। (१ राजा ८:४) ती सरसामानलाई निकै सम्मानजनक तरिकाले प्रयोग गरिन्थ्यो तर त्यसको उपासना भने पटक्कै गर्न मिल्दैन थियो। *
के त्रुटिपूर्ण मानिस पवित्र हुन सक्छ?
सक्छ। परमेश्‍वरले ख्रीष्टियनहरूलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ: “तिमीहरू पवित्र हुनै पर्छ, किनकि म पवित्र छु।” (१ पत्रुस १:१६) हुनत त्रुटिपूर्ण मानिसहरू परमेश्‍वरजत्तिकै पूर्ण रूपमा पवित्र हुनु असम्भव छ। तैपनि परमेश्‍वरका न्यायोचित आज्ञाहरू पालन गर्ने मानिसहरूलाई उहाँ “पवित्र अनि ग्रहणयोग्य” ठान्‍नुहुन्छ। (रोमी १२:१) कसैले पवित्र रहन प्रयत्न गर्छ भने त्यो कुरा तिनको बोली र काममा पनि झल्किन्छ। त्यस्तो व्यक्‍तिले “पवित्र रहो अर्थात्‌ अवैध यौनसम्बन्धबाट अलग रहो” अनि “आफ्नो सारा चालचलनमा पवित्र होओ” भन्‍ने बाइबलको आज्ञा पालन गर्छन्‌।—१ थिस्सलोनिकी ४:३; १ पत्रुस १:१५.
के परमेश्‍वरको नजरमा पवित्र ठहरिएको मानिस फेरि अपवित्र हुन सक्छ?
सक्छ। यदि कसैले असल आचरणसम्बन्धी परमेश्‍वरको स्तरलाई बेवास्ता गऱ्‍यो भने त्यो मानिस परमेश्‍वरको नजरमा पवित्र रहिरहनेछैन। जस्तै बाइबलमा भएको हिब्रूको किताब “पवित्र भाइहरू”-लाई सम्बोधन गरेर लेखिएको भए तापनि तिनीहरूलाई यस्तो चेतावनी पनि दिइएको छ: “होसियार रहो, नत्र त जीवित परमेश्‍वरबाट टाढा भएर तिमीहरूमध्ये कसै-कसैको मन विश्‍वासरहित र दुष्ट होला।”—हिब्रू ३:१, १२.
पवित्र हुनेबारे गलत धारणा
गलत धारणा: पवित्र हुन सांसारिक सुख-सुविधा सबै त्याग्नुपर्छ।
तथ्य: “आफ्नै शरीरलाई यातना” दिँदा अर्थात्‌ सबै कुरा त्याग गरेर जिउँदा त्यसले ‘शरीरका कुइच्छाहरूसित लड्‌न कुनै मदत दिंदैन’ भनेर बाइबल बताउँछ। त्यसैले परमेश्‍वरको नजरमा त्यसरी जिउनुको कुनै अर्थ छैन। (कलस्सी २:२३) बरु हामीले असल कुराहरू उपभोग गरेर आनन्द उठाएको परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ। बाइबल भन्छ: “आफ्नो सारा परिश्रमको फलस्वरूप मानिसले खानु, पिउनु र आनन्द उपभोग गर्नुनै परमेश्‍वरको दान हो।”—उपदेशक ३:१३.
गलत धरणा: अविवाहित रहँदा अझ पवित्र भइन्छ।
तथ्य: कुनै ख्रीष्टियनले अविवाहित रहने छनौट गर्न सक्छन्‌ तर अविवाहित रहँदैमा तिनी स्वतः परमेश्‍वरको नजरमा पवित्र हुँदैनन्‌। हुनत अविवाहित रहनेहरूले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान परमेश्‍वरको उपासनामा लगाउन सक्छन्‌। (१ कोरिन्थी ७:३२-३४) तर विवाह गर्नेहरू पनि पवित्र हुन सक्छन्‌ भनेर बाइबल बताउँछ। वास्तवमा येशूका प्रेषितहरूमध्ये पत्रुस विवाहित थिए भनेर बाइबलमा स्पष्ट सङ्‌केत पाउँछौँ।—मत्ती ८:१४; १ कोरिन्थी ९:५.
बाइबललाई किन “पवित्र बाइबल” भनिन्छ?
परमेश्‍वरको प्रेरणा पाएर लेखिएका किताबहरूको सँगालोलाई शताब्दीयौँदेखि “पवित्र बाइबल” वा “पवित्र शास्त्र” भन्‍ने नाम दिइएको छ। यसका निम्न कारणहरू छन्‌:
यसको श्रोत। “पवित्र शक्‍ति पाएर मानिसहरूले परमेश्‍वरको तर्फबाट बोल्थे।”—२ पत्रुस १:२१.
यसको सन्देश। ‘परमप्रभुको आदेश निर्मल छ, आँखालाई उज्ज्वल तुल्याउने। परमप्रभुको भय शुद्ध छ, अनन्तकालसम्मै ठहर्ने।’—भजन १९:८, ९.
तसर्थ बाइबललाई पवित्र मान्‍न सकिन्छ। यसमा लेखिएका कुराहरू शुद्ध छन्‌ र यसलाई परमेश्‍वरको उपासनामा प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले यो अरू किताबहरूभन्दा फरक छ।
^ अनु.2यहोवा भनेको परमेश्‍वरको व्यक्‍तिगत नाम हो। बाइबलका सयौँ पदहरूमा यस नामलाई “पवित्र” र “पवित्रता”-जस्ता शब्दहरूसित जोडेर प्रयोग गरिएको छ।
^ अनु.6धार्मिक चिजबिजको उपासना गर्न बाइबलले निषेध गरेको छ।—१ कोरिन्थी १०:१४.
शेयर गर्ने शेयर गर्ने पवित्र हुनु भनेको के हो?
ijwbq लेख १३७
के मैले सन्तहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ?